Onye nwetara mmeri kachasị sie ike n’ụwa 2020? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ọsọ siri ike nke ụwa - azịza na-adịgide adịgide
Ọsọ siri ike nke ụwa - azịza na-adịgide adịgide
Onye nwetara mmeri kachasị sie ike n’ụwa 2020?
Otu New Zealand
CHTR US ANY DR ọgwụ ọjọọ ndị na-agaghị egosi, ọ na-arụ ọrụ. LEE ANYA NA NT ENKWU. UGBU A, A GRUP OF ATHLETES SITE OREGON Ndi na-acho ka ihe ịma aka maka usoro ihe omuma ohuru nke akpọrọ aha ndi mmadu kachasi ike. 66 otu sitere na mba 30 dị iche iche.
AKWCKWỌ, Achọrọ m ịmasị gị. Enweghị m ahụmịhe isonye na agbụrụ kachasị ike nke ụwa nke na-ele anya dị egwu. WELLTHIS TEAM SITE BABA B TOR TO WORLDWA NILE ECO NKAS FITA FIJI YOU P SER SOM SOMFỌD OF N’IME UNU N’ THELỌ AHERER THE ỌH NEWR NEW ỌH DRR DR DRROP TBOMR AM NA AMAZON PRIME VIDEO NKE FAMOUSSURVIVALIST WHO NA-ECHERE NA GOSI, JASON MAGNUS EZI MM GU NM GU NS GU.
Morningtụtụ ọma, ọma nụ, m na-atụ anya ịgwa gị okwu banyere nke a. Gwa anyị ntakịrị banyere agbụrụ gị na ụdị ịgba ọsọ ị na-eme ugboro ugboro na ihe ngosi maka afọ 15. N’ụwa nile, ya mere, Ọ B A Kdị njikọta na ọ dị nnọọ ịtụnanya na ha maara na anyị na-ekwu okwu banyere agba ọsọ ọsọ.
EE, Ọ B A Ydị NT COMR AD N'ALLLỌ ỌZỌ Ọ B IS Egwuregwu Pụrụ Iche ebe ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ọsọ. NILE NA OTU ANDBỌCH WITH NA-ENWEGH TIM oge dị ka agbụrụ a bụ ụbọchị 11 na-enweghị nkwụsị, EE KWESANTR, KWES ,R,. CHINEKE M GA-EKWU G OF OFFỌD OF N’ THER THE ỌR OB OBB OBR YOU YOUB FR FI NA FIJI NA ihe mere ka njem a sie ike ka ị na-alụ ọgụ megide onwe gị n’ihi na ihe ndị na-adịghị apụta ìhè ma na-ele ajọ ọgụ ọgụ.
Ọ B IFR IF na ọ bụ naanị na-efegharị efegharị na-abụ mgbe niile, họrọ gị na-aga n'ụzọ ọ bụla ị maara. MILI 500 MILE 500 KILOMETERS MA Ọ B TH Ọ B ARE naanị na 31 Ndepụta, Ya mere, anyị nwere ike ịnwale ebe ọ bụla ị chọrọ ịme nnyocha ahụ, ya mere, oge ụfọdụ na-anwa ime gị obere oge anyị mara na ị na-achọ ịchọta gị n'oge ọ bụla. OBI YOUM YOU YOU MAGH W MGBE DO NA-EME NT RRIGHT KWES ,RIGHT, YOU NA-ECHI NA NKWUKWU ND AND NA-ECHICHE Mgbe ụfọdụ ị na-ahụ ìgwè dị iche iche.
IHE Ọ B MUSR MUS KWES STROP KWES BR B KWES THER THE ỌM NMA, Ọ B RE Ọ B RE N'YOULỌ N'WITHLỌ N'TELỌ N'YOURLỌ N'AMLỌ NA ANDMATA Ọ B YOU Ọ B FOR NA Ọ B S Ọ B FOR Ọ B FOR NA Ọ B YOU Ọ BUSE N'THELỌ KWES OTHERR THE NT OTHERKWU ND OTHER ỌZỌ B IS NA Otu n'ime mmadụ anọ ahụ nọ na egwuregwu ahụ OH YEAH, I Mara na ị nwere ihe ọ bụla, ya mere, ị hụla na otu egwuregwu ndị ọzọ bụ isi okwu gị, ọ bụrụ na ị mara mma ma ọ bụ nwee mmasị na-enwe mmasị na ya, na ị na-egosi na ọ bụ ihe atụ, kama ọ bụ n'ụzọ zuru oke na-echekwa. N'ebe ahụ na ndị na-emepụta ihe ahụ, ọ dị mfe ịnweta PGB PER PE AKW IKWỌ Achọrọ m ịhụ agba ọsọ ndị ọzọ ị mere n'oge gara aga. EJI M N’AKA NA ISD IS HOLD HOL A.
Mmepụta akụkụ nke ihe nile ga-akpata igwefoto ogbo, na-eleghị anya na-enweta a iche iche. M N'EZIOKWU NA B'S N'INLỌ NCHE A N'ONLỌ AKW WORLDKWỌ AKW WORLDKWỌ WORLDWA MFE 10 NA ANY ARE B A ỌB AR CON THATBỌCH THAT NA Ọ GA-AB A B RE EZIOKWU GHARA 'Ọ B ALLGH ALL Ọ B ALL Ọ B ALL Ọ B ALL Ọ B ALL Ọ B B Ọ B B Ọ BEST Ọ B B Ọ B B Ọ B BR B NA. Ọ B J USFỌD OF OFBỌD OF ASBỌD OF NT ASKWU ND TO NA-AGA N'IHU NA ANA MARA NA A NA-EME IHE A, NA A NA-EME A IJI ECLỌ NT WHRERE EBE A NA-AMAGH W MGBE ANY WE GA-EME. IHE NA Ọ Ga-enyerị ihe ọ bụla ma nweta ihe niile n'elu a nwere ike ịbịa mgbe ahụmahụ a taa ka gbalịa iji ego anyị.
Anyị nwere 18 ma nwee nnukwu. Echere m, ị hụrụ na ọ bụrụ na ịchọghị Ahụmahụ niile maka ahụmịhe ndị ọzọ, Ọ B THE Ọ B THE Ọ B WE Ọ B WE Ọ B WER WILL NA YOU GA-EME, THIS B THIS Ọ BORT Ọ B SP Egwuregwu dị ịtụnanya, M KWES EXR EX NT TOTA. Nke ahụ dị ezigbo mma ugbu a, m na-elele anya na ANYAR NA-EBU EGO, M B MC ỌRUR, Ọ B GU Ọ B YOU Ọ B GU Ọ B GU NA-EKWU YBAT ERYB worR wor worB worR W ONDB thatROND toB thatR that M na-ekwu na ị ga-elezi anya ma tinye aka na otu anyị ga-esi gaa n'ebe ndịda.
O doro anya na ị maara na ị gaghị enwe ihe 100 na-echefu echefu dị ka otu o si dị na ACHEESE, M maara na ọ hụrụ ọhụụ dị egwu. N ’OBI, obi dị m ụtọ ịhụ ihe ị ga-eme nke ọma, I meela nke ukwuu maka ịbụ onye otu taa. ANY ARE NA-EGO KWES TOR TO TOLỌ KWES THER To ỌZỌ siri ike na ụwa ECOCHALLENGE FIJI DROPS TOMORROW AMAZON A PRIME VIDEO HERE
Ego ole ka agbụrụ kacha sie ike n'ụwa na-efu?
Otu New Zealand meriri ike ọgwụgwụ, oke ọnọdụ na ụgbọ mmiri na-emikpumerieihe omuma ojoo nke Eco-Challenge Fiji na Amazon Prime usoroỌsọ Kasị Ike nke Worldwa, nke Bear Grylls kwadoro.Ọgọst 21 2020
Ihe omume egwuregwu kasịnụ n'ụwa na-aga n'ihu, ya na ndị otu 32 eruolarị maka asọmpi kachasị. Ka anyị na-ede ihe a, akụkọ a bụ na mba onye ọbịa Russia rutere Saudi Arabia na egwuregwu mbụ nke asọmpi ahụ. Brazil bụ ọkacha mmasị na saịtị ịkụ nzọ kachasị, Germany, Spain na France na-esote.
Portugal na Argentina kwesịkwara inwe ohere, ebe England na ndị mba ahụ na-enwe nkụda mmụọ ruo mgbe ebighi ebi bụ ndị rọrọ nrọ na 1966 nwekwara ike ime nke ọma na ihe a ga-akpọ obere otu, World Cup enwetabeghị onye isi. Mana ị maghị, eleghị anya n’afọ a ọ ga-abụ nke ikpeazụ n’etiti Senegal na Iran. Ma taa, anyị ga-ekwu maka ego, ọ bụghị ụdị, na nke a nke InfographicsShow, The Costs of the World Cup.
Nke mbu, oburu na imaghi ka esiko World Cup na aru. Na mbido, a ga-ekewa otu 209 n’ụwa niile na mpaghara isii. Naanị otu narị abụọ na iri asaa sonyere, Zimbabwe na Indonesia bụ ndị erughị eru tupu e bido otu egwuregwu, yabụ ndị otu mpaghara ndị a na-egwusa ibe ha ihe dịka afọ atọ.
Naanị otu 32 tozuru etozu. Onye na-akwado asọmpi a na-anata oche mgbe niile na akpaghị aka. Asọmpi mbu na-amalite site na otu otu yana otu asatọ nke anọ.
Ndị otu ndị otu a na-egwusa ibe ha, otu egwuregwu abụọ a tozuru etozu tozuru oke. Anyị nwere ike ịgaghị agwa gị na ị nwetara isi atọ maka mmeri na otu isi maka eserese; mgbe otu abụọ nwere otu isi ihe, a na-akpọ ihe mgbaru ọsọ, nke pụtara na otu ndị na-enwekwu goolu ma na-enye obere goolu nwere, na-aga n'ihu ndị ọzọ na otu isi; ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ dị iche bụ otu ọ ga-abụ onye nyere goolu kachasị, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ otu mgbe ahụ ndị otu abụọ ahụ ebipụla ibe ha. N'ebe a, ọ bụrụ na egwuregwu ejikọtara mgbe nkeji iri itoolu gachara, ha na-egwu nkeji abụọ nkeji iri na ise na-ahụ ihe ọhụụ site n'inye ndị otu nnọchi anọ n'oge oge.
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ ka jikọtara mgbe nke ahụ gasị, a ga-enwe ntaramahụhụ ntaramahụhụ. Ndị a bụ otu na otu: Ọtụtụ mgbe enwere ihe dịka otu ọnwụ, ya bụ ndị kacha sie ike.
N'afọ a, ọ bụghị n'ezie ọ doro anya nke otu ọ bụ dịka ndị otu kachasị dị iche. Agbanyeghị, enwere ike ịsị na Group D bụ nke siri ike dịka Argentina, Croatia na Nigeria bụ otu ndị siri ike. Enwere ike ịrụrịta ụka na ndị otu ọ bụla nọ na Group F ruo a. na-egwuri egwu dị elu.
Ndị otu ndị ọzọ niile nwere nzere ntozu abụọ dị mfe. Isnye ga-ele ihe a? Ọfọn, na 2014 ijeri mmadụ 3.2 kwụ n'ahịrị maka asọmpi ahụ.
Nke ahụ adịghị anya na ọkara nke ọnụ ọgụgụ ụwa. Ọ bụ ijeri mmadụ 1,013 hụrụ nke ikpeazụ.
Tụlee nke ahụ na ndị na-ekiri nde mmadụ 112 bụ ndị hụrụ Super Bowl 50. Ndị na-ekiri ndị ahụ bụ naanị telivishọn. A na-ekwu na nde mmadụ 280 ọzọ gburugburu ụwa elelela egwuregwu ahụ na ịntanetị.
Asọmpi a na-eweta ọtụtụ ijeri naịra maka onye ọ bụla metụtara mgbasa, mgbasa ozi t, njem na nkwado. FIFA ma ọ bụ Fédération Internationale de Football Association ga-eweta ihe ruru ijeri US $ 6. Organizationtù a na-enweghị uru na-enweta ego a dị ịtụnanya site na ụtụ isi.
FIFA na-enye ndị ọrụ ụlọ ọrụ ya ikike ikike, ebe obibi na ikike obibi, ikike ịre ahịa na ire tiketi. FIFA kwuru na ego niile a ga-ala azụ azụlite 'egwuregwu mara mma' n'ụwa niile. Anyị nwere ike ịgbakwunye na FIFA etinyela aka na mkparị iri ngo.
Onye ọ bụla chọrọ otu mpempe iko mba ụwa, e boro FIFA ebubo na ọre iberibe akwụkwọ ndị a. Naanị iji nye gị echiche banyere ego a na-eme ma mefuo, anyị nwere ihe ole na ole. Forbes na-akọ na tupu Egwuregwu amalite, ndị Russia zụtara tiketi 871,797 na Brazil 72,512.
Nke ahụ bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-aga ọwụwa anyanwụ. Ekwuru na maka egwuregwu mmeghe naanị, tiketi na-efu n'etiti $ 50 na $ 550, mana maka ngwụcha, tiketi dị ọnụ ala bụ $ 1,100 yana weebụsaịtị kachasị elu na-ere tiketi ikpeazụ maka ihe dịka $ 5,000. Agbanyeghị, ndị a bụ tiketi VIP.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ma chọọ ịme mgbasa ozi n'oge ngwụcha ahụ, ọ gaghị adị ọnụ ala. Companylọ ọrụ dị na US jiri $ 1.18 nde na mgbasa ozi iji gbaa n'oge ngwụcha 2014.
Onye ọbịa, Russia, kwuru na o mefuru $ 11.8 ijeri na asọmpi ahụ. Ee, ị nụrụ nke ọma.
Anyị nwere ike ịgbakwunye na Brazil mefuru ijeri $ 15 na iko mba ụwa nke 2014. Pasent 70 nke ego Russia ahụ sitere na mmefu ego gọọmentị mba ahụ, nke pụtara na ndị Russia akwụrụ ya. Kedu ego niile a na-emefu? Ọfọn Na asọmpi a oke, ị ga-azụlite akụrụngwa maka otu ndị a niile ma gaa ịzụlite ndị egwuregwu.
Ee, ọ dị ọnụ, mana enwere ezi ihe kpatara mba ga-eji kwụ ya. Russia nwere ekele na ego sitere na Asọmpi ahụ ga-abụ ihe dị ka $ 26 na $ 30, ọtụtụ n'ime ha ga-abịa site na njem na itinye ego. A kọrọ na Qatar ga-eme nke ọma karịa ihe niile maka iko ụwa nke 2022, ebe a ga-ahụ ego ole United States, Canada na Mexico ga-emefu mgbe mba ndị a ga-anabata 2026 World Cup.
Ma olee ebe ihe niile $ 11.8 ijeri gara? gaa? Ọfọn, Bloomberg na-ede na ijeri $ 4.8 abanyewo n'ịrụ ámá egwuregwu ọhụrụ na iweghachi nke ochie.
Egwuregwu ndị a ga-eme na ama egwuregwu iri na abụọ n’obodo iri na otu, ebe mpaghara ya dị puku kilomita abụọ, narị asatọ na iri isii na isii. Nke kachasị ọnụ n’ime ha bụ St Petersburg Stadium dị na St.
ụkwụ na mgbatị ahụ
Petersburg, nke tara $ 1.1 (wuru na 2017). Emere Rostov Arena na 2018 wee fu nde $ 312.
Emeghere ogige Stalin Kaliningrad (nde US 299), Mordovia Arena dị na Saransk (nde US $ 300) na Volgograd Arena (dollar 273 US) ka emepere ọhụrụ. Nde), Samara Arena ($ 320), na Nizhny Novgorod Stadium ($ 287 nde). A ga-egwu nke ikpeazụ na ama egwuregwu kachasị na Russia, Luzhniki Stadium na Moscow, mana ọ dịla kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Kedu maka ego ndị fọdụrụ na Russia? ga-emefu? Ọfọn, Russ ia na-ekwu na ọ na-aga ma ọ bụ gaa na akụrụngwa. Nke ahụ pụtara ụzọ, ụlọ ọhụrụ, njem na akụrụngwa ndị njem. Ebe ọ bụ na aha ihe omume a edochaghị anya, ya bụ na ọ ga-eri onye ga - eme ya, ka anyị ga - abawanye ma jụọ ego ole ọ ga - efu gị Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị bụ onye Amerịka nakwa na ị banyela n’iko mba ụwa na ndepụta ịchọrọ.
Ọ dabara nke ọma, mmadụ gbakwunyere ego ịnọ na Russia n’oge asọmpi ahụ na ikiri egwuregwu anọ, na-agụtaghị agba nke ikpeazụ. Onye ahụ ga-anọ ebe obibi kpakpando anọ wee nweta tiketi dị ọnụ ala karịa. A gbakwụnyere ụgwọ niile ndị a: 'Travel Travel FoodHotel Airport TransfersChartered Air n'etiti ndị ọbịa Ọbịa Ground Match Transfersand Pre-Game Parties' Ọnụ ego niile bụ USD 10,500, mara mma akụ na ụba.
Ọ nwere ike ịdị mfe okpukpu abụọ karịa nke ahụ! Ya mere, gịnị ka ị ga-ekwu? Odi ezigbo ego? Ma ọ bụ enweghị ụzọ ị ga - esi jiri ihe karịrị 10 tozuru oke ịsọ mpi iko mba ụwa. Ka anyị mara na ihe ị chọrọ n'uche gị! ijide n'aka na ị lelee isiokwu anyị ọzọ nke akpọrọ Milwaukee Monster: Akụkọ nke Jeffrey Dahmer! Daalụ maka ikiri na dịka echefula ịmasị, ịkekọrịta na ịdenye aha. Lee gị oge ọzọ!
Kedu ka m si ele agbụrụ kacha sie ike n'ụwa?
Otu n'ime ajụjụ ndị gbara agba na ndị nwere ike ịgba ọsọ n'ọdịnihu bụ:ego olebụ ntinyeego? Ọfọn, site na ihe Reality Titbit enwewo ike ịchọpụta, na dị ka e hotara na Santa Cruz Sentinel, ntinyeegobụ $ 5,000 kwa otu.Ọgọst 27 2020
Ọsọ ọsọ kachasị sie ike n'ụwa ọ dị adị?
Ebee ka m nwere ikelelee Ọsọ Kasị Ike nke Worldwa: Eco-Challenge Fiji?Ọsọ Kasị Ike nke Worldwa: Eco-Challenge Fiji dị naanị na Amazon's Prime Video. Ọ bụrụ n ’ị bụ onye otu Amazon Prime, ị nweelarịrị ohere ịnweta ya site na ndenye aha gị na Amazon. Ọ bụrụ na ị bụghị onye otu, Prime na-enye nnwale ụbọchị 30 n'efu.Ọgọst 14 2020
Enwere ndị otu egwuregwu Britain na agbụrụ kachasị sie ike n'ụwa?
Otu nke ụwa ọzọ ama amaagbụrụmakaOtu UKNdị Adventure ga-abụ njem ITERAAgbụrụ2021, na Oban Scotland. Dị ka akụkụ nke AdventureInggba ọsọWorld Series, njem ahụ were ụbọchị ise ma gafere 600km mgbe emechara ya.Sep 30 2020
Ndi otu otu gwụchara agbụrụ kacha sie ike n'ụwa?
KeduOtuUgo ScoutsEmecharana 'Ọsọ Kasị Ike nke Worldwa: Eco-Challenge Fiji 'Nke 66ìgwènke malitere njem ụbọchị 11, ụzọ abụọ n'ụzọ atọEmecharatupu oge nkwụsị.OtuUgo ScoutsEmechara43 nke 44ìgwènaEmechara, na-emecha njem naanị 90 nkeji tupu usoro ahụ emechi.Ọgọst 24 2020
Ogologo oge ole ka agbụrụ kasị sie ike n'ụwa?
11bọchị 11, kilomita 416agbụrụ kacha sie ike n'ụwa”Bụ azụ. Mgbe afọ 18 hiatus realty tv mastermind Mark Burnett kpọlitere 'Eco-Challenge' maka ndị ọhụrụ na Amazon Prime Video.08.21.2020
Onye nwetara mmeri kachasị sie ike n'ụwa Fiji 2020?
Ka Nathan Fa'avae gbawara ọsọ ya na ndị otu New Zealand yamerieEco-Challenge naFiji, ọ gbawakwara n'ihu ọha na eze na Amazon Prime show “NdịỌsọ Kasị Ike nke Worldwa”, Nke Bear Grylls kwadoro.08.26.2020
Otu n'ime ndị na-esoteụwaama amaagbụrụmakaOtu UKNdị Adventure ga-abụ njem ITERAAgbụrụ2021, na Oban Scotland. Dị ka akụkụ nke AdventureAgba ỌsọUsoro, njem ahụ were ụbọchị ise ma gafee 600km mgbe emechara ya.09.30.2020